Mgbidi na-ekpuchi mgbidi (desktọọpụ)
Basic nlereanya: BH33-1010 (304)
magburu onwe atụmatụ:ezigbo 304 igwe anaghị agba nchara, nwere ihe karịrị 8 nickel. Nhazi nhazi, nwere ike igbochi acid, alkali, nnu na ihe ndi ozo na-emebi. Ego. Mgbidi arụnyere na saịtị ọrụ anaghị ewere ohere.
ihe onwunwe: isi aru 304 igwe anaghị agba nchara 3, ngwaọrụ ịsa ahụ: mba.
Mmiri mmiri na ngwaọrụ efu nke eyewash na-etinye n'okpuru n'okpuru permafrost. Mepee valvụ ahụ, mmiri mmiri pọmpụ na-abanye n'ime usoro nkuchi anya site na ntinye mmiri dị n'okpuru ala. Mechie valvụ ahụ, usoro ahụ nwere ike ịmịchaa mmiri na akpịrị nkuanya. Ọ dabara na oge oyi n'okpuru ogo 0 nke mpaghara ahụ, omimi nke permafrost karịrị 500MM iji mee ihe, na-egwu mmetụta mgbochi mgbochi ọ bụla n'ezie. A ga-ekpe ndị ngwaahịa Patented, adịgboroja ikpe; Patent nọmba: ZL 2012 2 0337278.7
Atụmatụ bara uru: ntinye mmiri na ngwaọrụ drainage nke ehicha anya anya ka arụnyere n'okpuru permafrost. Mepee valvụ ahụ na mmiri mmiri na-asọba n'ime sistemụ anya anya site na mmiri mmiri. Mgbe valvụ ahụ mechiri, sistemụ ahụ nwere ike ịmịpụ mmiri na akpachapụ anya. Ọ dabara na oge oyi n'okpuru ogo 0 nke mpaghara ahụ, omimi nke permafrost karịrị 500MM iji mee ihe, na-egwu mmetụta mgbochi mgbochi ọ bụla n'ezie.
Vertical anya washer
304 igwe anaghị agba nchara n’èzí, nke ejiri ihe mkpuchi ABS na-acha odo odo, ọkpụrụkpụ nke 300 microns, nchacha dị mma nke mgbidi dị n’ime pipeline, na-eme ka njigide nke nku anya na gburugburu ebe obibi na-emebi emebi, na-arụ ọrụ nke iwusi mmebi ahụ ike.
Akpaaka anya na-ahụ maka njikwa akpaka site na fotoelectric, electromagnetic control na usoro nchịkwa ntinye. N'ọnọdụ nke mmerụ anya, ọ dịghị mkpa ijikwa aka aka na valvụ na-apụ. Naanị tinye ọnọdụ kwekọrọ, onye ncha anya nwere ike ịmịpụ mmiri na-akpaghị aka. Ntughari uzo ndi mmadu mejuputara, mata n'ezie onye meruru aru n'oge, uzo anya na aru ya, odi nma na ngwa ngwa. Mgbidi arụnyere na saịtị ọrụ anaghị ewere ohere.
304 igwe anaghị agba nchara efere na-mere site ekwe, ọkpụrụkpụ bụ 1.2mm. Na-aga n'ihu n'iji 15 nkeji na-enweghị spillover.
Mpaghara nke 1000 * 900 * 2400mm (ogologo * obosara * elu).
Ọ nwere ezigbo nguzogide mmanụ, acid, alkali na nnu.
Enwere ike iji ya na vetikal na ọtụtụ ihe mejupụtara anya.
Nri elu, njikọ 5/4 njikọ MNPT, ntanye 150mm n'elu ala, njikọ 3/2 njikọ FNPT ma ọ bụ njikọ flange.
ọ bụ igbe nchekwa mmiri nke ihe nhicha anya bụ nke oroma polyethylene;
Nchekwa mmiri kachasị: galọn 14 (lita 53), 15 nkeji;
n'ihi na mmiri na-adabere na nrụgide nke ya, n'ihi ya ọ dịghị mkpa maka usoro mgbawa;